Platform – MIDQARAN
Xisbiga MIDQARAN waa xisbi heer qaran oo ka diiwaan gashan Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka oo afka qalaad looo yaqaan “National Electoral Independent Commission” ee Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya. Xisbugu waxa uu u taaganyahay in la gaaro Qaran Soomaaliyeed oo MID ah oo ay dadkiisu ku wada noolyihiin cadaalad, nabad-galyo, iyo walaaltinimo sida ay ula jaanqaadan shucuubta caalamka kale una hormariyaan wadankooda.
Dalka waxa uu mudo dheer kusoo jiray colaad iyo dhibaatooyin badan oo laga dhaxlay mudadii dheereed ee dowlad la’aantu ka jiraty Soomaaliya, dad badan-na ay aaminsanyihiin in dhibaatadu ka horreeysay xilligii burburka dowladnimada Soomaaliya kana dhalatay cadaalad daro badan, eex iyo qof-jecleysi laga tirsanayey maamuladii hore ee dalka soo maray. Mudo ku dhow 28 sano muwaadiniinta Soomaaliyeed ma helin adeegyada bulshada ee aasaasiga ah ee looga baahanyahay in Dowladi shacabkeeda u qabato sida sugidda amniga, ilaalinta xuquuqda shaksiga, gaarsiinta adeegyo waxbarasho, caafimaad iyo shaqa abuuris u suurtageliya in qof walba oo Soomali ah ku nolaado nolol sharaf leh, iyada oo si hufan bulshada wax loogu qabanaayo canshuurta ay muwaadiniintu bixiyaan, sidoo kale la ilaaliyo kalsoonida canshuur bixiyaha. Xaaladahaasi waxay horseeday in ay sii wiiqdo kalsoonida shacabku ay ku qabaan dib u abaabulidda iyo dhismaha dowladooda.
Xisbiga MIDQARAN waxa uu aaminsanyahay mabda’a ah in dib loo hanto kalsoonida shacabka, la dhiso dawlad mug iyo tayo leh oo ay dowladdu ugu shaqeyso shacabkeeda si daacad iyo sinnaan. Si taasi loo helo waxa lagama maarmaan ah in la hirgeliyo hay’ado tayo leh oo la yimaada si rasmi ah shaqo ku saleeysan hawlkarnimo iyo hufanaan tasoo haqab tirta baahida balaaran ee bulshada Soomaaliyeed, islamarkana gaarsiisa horumarka weyn oon tigsaneeno.
Fadlan si aad uga bogato mabaad’ida iyo siyaasadda xisbiga oo dhameystiran, riix badhanka hoose!